सुशान्त मृत्यु प्रकरणमा सिबिआईले खाेज्नुपर्नेछ यी १० प्रश्नकाे उत्तर :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, साउन २३
भारतको केन्द्रीय सरकारले बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्यु प्रकरणमा सिबिआई जाँच गर्ने निर्णयसँगै मुम्बई प्रहरी र बिहार प्रहरी बीचको रस्साकस्सीले अर्को बाटो समातेको छ।
बिहीबार साँझ सिबिआईले सिंहकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उनका बाबुसहित ६ जनाविरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेपछि घटना नयाँ तहमा पुगेको हो।
अब यो मुद्दा सिबिआईले लिएसँगै कयौं स्वभाविक प्रश्नहरूको उत्तर पाइने आशा राखिएको छ।
सिबिआईले बितेका महिनामा सामाजिक सञ्जाल लगायतका ठाउँहरूमा बनेका रहस्यसँग सम्बन्धित निम्ति लिखित १० प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्नेछ।
फेब्रुअरीमा राजपुत परिवारले अभिनेताको जीवन खतरामा भएको हुनसक्ने बारेमा दिएको चेतावनीका बारेमा किन कुनै कदम चालिएन?
-अगस्ट ३ मा सुशान्तका बाबु केके सिहले एक भिडिओमार्फत् फेब्रुअरी २५ मा आफूले बन्द्रा प्रहरी(मुम्बई)लाई छोराको अवस्थाका बारेमा आफू चिन्तित रहेको जानकारी दिएको बताएका थिए। सो दाबीलाई पुष्टि गर्न सुशान्तको परिवारले उनका बहिनी ज्वाईं, ओ पी सिहं र मुम्बई प्रहरीबीच भएको संवादको ट्रान्सक्रिप्ट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा मुम्बई प्रहरीलाई प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको परिवारले सुशान्तलाई तीन महिनासम्म एयरपोर्ट नजिकैको रिसोर्टमा लगेर राखेको र त्यहाँदेखि उनको आर्थिक मामिला व्यवस्थापन गरेको बताएको थियो। यस दाबीको मुम्बई प्रहरीले खण्डन गर्दै यसबारेमा कुनै लिखित उजुरी नदिइएको जनाएको छ। ओ पी सिंह यस प्रकरणलाई अनौपचारिकरूपमा समाधान गर्न चाहन्थे र प्रहरीले त्यो सम्भव नभएको बताएको थियो। सिबिआईले अब यसलाई आधार मान्ने कि नमान्ने भनेर निर्णय लिन बाँकी छ।
सुशान्तले आत्महत्या गर्नु ६ दिन अगाडि रहस्यमय रूपमा आत्महत्या गरेकी उनकी पूर्व व्यस्थापक दीशा सालियानको घटनाको अनुसन्धानमा के निस्किएको थियो?
-धेरैलाई सुशान्त र उनकी पूर्व व्यवस्थापक सालियानको मृत्युमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा छ। दुबैले छोटो समयको अन्तरालमा आत्महत्या गरेकाले यो जिज्ञासा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।
अगस्ट १ मा जब बिहार प्रहरी सालियानको मृत्युसम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन मुम्बईको मलवानी प्रहरी चौकी पुगेपछि उनीहरूलाई ततःसम्बन्धी जानकारी भएको फोल्डर दुर्घटनावश मेटिएको र पुनः फिर्ता गर्न नसकिएको जानकारी दिइएको थियो। यद्यपी त्यसको भोलिपल्ट मुम्बई प्रहरीले यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूसँग सम्पूर्ण जानकारी रहेको र दीशाको परिवारले कसैका विरूद्ध कुनै उजुरी नदिएको बताएको थियो। सुशान्तको मृत्युसँग उनको मृत्युको कुनै पनि सम्बन्ध देखिए के त्यसले सालियानको मृत्युको रहस्य खोल्नेछ?
किन कसैले पनि हराएको सिसिटिभी फुटेज, डुब्लीकेट साँचो र ५० वटा सिमकार्डको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनन्?
-संचार माध्यममा राजपुतको मृत्यु हुनु अघिल्लो रात उनी बस्ने बिल्डिङको सिसिटिभी फुटेज नभएको रिपोर्ट गरेका थिए। सोसँग घटना सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट छैन। यसैगरी उनको कोठाको डुब्लिकेट साँचो पनि गायब छ। जसका कारण घटनाको दिन बाहिरबाट मानिस बोलाएर ढोका फोर्नुपरेको थियो। पछि साँचो फेला परेको बताइएको थियो।
त्यसैगरी मिडिया रिपोर्टमा एक महिनाको अवधिमा सुशान्तले ५० वटा सिमकार्ड फेरेको जनाइएको छ। अब ती सबै सिम कार्डहरूको 'कल हिस्ट्री'सहितको विस्तृत जानकारी निकालिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा जानकारी सार्वजनिक हुने/नहुने हेर्न बाँकी छ। कानुनी र आपराधिक जानकारीहरूका अनुसार सुशान्तको घाँटीमा देखिएको दाग उनी झुण्डिएको पासोको कपडासँग नमिलेको र उनको शरीरमा कयौं चोटपटक थियो। यी सबै कुरा सिबिआई जाँचमा प्रमुख प्रमाण हुनेछन्।
के राजपुतका छिमेकी सिद्धार्थ पिठानीको बयानसँग सुशान्तको घरमा काम गर्ने कर्मचारीसँग मिलेको छैन?
-पिठानी र सुशान्तका घरेलु कर्मचारीको बयान परस्परमा मिलेको छैन। रिपब्लिक टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पिठानीले आफूलाई सुशान्तको मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा केही थाहा नभएको बताएका थिए भने त्योसँगै उनले दैनिकरूपमा औषधिको दुइटा गोली दिने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
यद्यपी राजपुतका अंगरक्षकले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा सो च्यानललाई आफूले चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि किन्ने गरेको र सो औषधि रियाले सुशान्तलाई दिने गरेको बताएका थिए। सिंहका भान्सेले पनि रियाले नै ती औषधिको व्यवस्थापन गर्ने गरेको र ती औषधिको सेवनपछि सुशान्त दिनको अधिकतर सुत्ने गरेको स्वीकार गरेका थिए।
रियाले कसरी सबभन्दा महँगो वकिललाई आफ्नो मुद्दा लडाउन सक्षम भइन्?
-सुशान्तका बाबुले पटनामा आफूविरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेलगत्तै रियाले सतिश मनसिन्धेलाई आफ्नो वकिल बनाइन्। उनले यति महँगा र चर्चित वकिललाई कसरी आफ्नो मुद्दा लड्नका लागि राख्न सकिन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यी उनै वकिल हुन् जसले सन् १९९३ मा भएको मुम्बई बम काण्डका आरोपी संजय दत्त र सवारी दुर्घटनामा आरोपित सलमान खानको मुद्दा लडेका थिए। सुशान्तको खाताबाट १५ करोड भारू उनको सम्बन्ध नै नरहेका खातामा शंकास्पदरूपमा भुक्तानी भएको कुराले गम्भीर आशंका उत्पन्न गर्दै आएको छ। रियालाई यसअघि नै कालो धन मामिलामा जानकारी मागिसकिएको छ।
के रियाले घटनामा बिहार प्रहरीको संलग्नताको प्रतिरोध गरेकी थिइ्न, के मुम्बई पुलिस सिबिआई जाँचको विरूद्ध छ?
-पटना प्रहरीमा सुशान्तको परिवारले रियाविरूद्ध उजुरी दिएपछि पटना प्रहरीले घटनाको जाँच सुरू गर्‍यो। त्यसपछि रियाले घटना मुम्बईमा घटेकाले पटनाको उजुरीलाई मुम्बई सार्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइन्। त्यसपछि महाराष्ट्र राज्यका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले जाँचका लागि मुम्बई प्रहरी सक्षम रहेको र जाँच सही दिशामा गइरहेकाले सिबिआई जाँचको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए। घटनामा यो अनिच्छा र सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेमा के यो मुद्दाको छानबिन अझ जटिल हुनेछ?
बिहारबाट जाँचका लागि पठाइएका आइपिएस अधिकारीलाई मुम्बईका अधिकारीले किन क्वारेन्टिनमा राखे?
-राजपुत मृत्युमा छानबिन गर्न बिहारबाट मुम्बई पठाइएका आइपिएस अधिकारी विनय तिवारीलाई मुम्बई पुगेलगत्तै त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले १४ दिनको क्वारेन्टिनमा पठाएका थिए। यसमाथि मानिसहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। उनी आउँदैछन् भने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै उनलाई किन क्वारेन्टिनमा राखियो? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बिहार प्रहरीका प्रमुखले यसलाई क्वारेन्टिनका नाममा घरमा बन्दी बनाएको आरोप लगाएका छन्। अगस्ट ५ मा सर्वोच्च अदालत समेतले यस व्यवहारले सही सन्देश नदिएको बताएको थियो। सोही दिन बिहार प्रहरी प्रमुख गुप्तेश्वर पाण्डेले मुम्बई प्रहरीले आफ्ना प्रहरी अधिकारीलाई क्वारेन्टिन नराख्न गरेको पत्राचारलाई अस्वीकार गरेको ट्विटमार्फत् बताएका थिए।
के यसमा शंका बाहेक राजनीतिक संलग्नता पनि छ?
-घटनाको ५० दिनमा सुशान्तकी पूर्वप्रेमिका, निकट साथीहरू, परिवार, नातेदार र बलिउडकर्मी गरी ५० भन्दा बढी मानिसलाई सोधपुछ गरिएको छ। यद्यपी दीशा सालियानले आफ्नो आत्महत्या अगाडि दिएको पार्टीमा महाराष्ट्रका मन्त्री आदित्य ठाकरेको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ।
सो आरोप ठाकरेले अस्वीकार गरेका छन्। मिडिया रिपोर्टहरूमा सो पार्टी सुरज पंचोलीको निवासमा भएको जनाइएको थियो जसको इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पंचोलीले अस्वीकार गरेका छन्।
सुशान्तको मृत्युको केही समयमा नै किन यसलाई मात्र आत्महत्या भनेर केस बन्द गरियो?
-जुन १४ मा सुशान्त बान्द्रामा रहेको भाडाको अपार्टमेन्टमा मृत भेटिए, घटनालाई प्रहरी, प्रत्यक्षदर्शी, अस्पताल प्रशासनसहित सबैले यसलाई आत्महत्यामात्र माने, हत्या ठानेनन्।
यसले धेरै प्रश्नहरू उठायो। किन फरेन्सिक जाँचका लागि कुरिएन, किन घटनास्थललाई प्रहरी आउनेबित्तिकै सिल गरिएन? कसरी उनको मृत शरीरको फोटो सामाजिक सञ्जालमा तुरून्तै उपलब्ध भयो? जस्ता प्रश्नहरू छन्।
किन सुशान्तको चिकित्सकीय जाँच र उपचारका रिपोर्ट सामाजिक स्थानहरूमा उपलब्ध भयो?
-मुम्बई प्रहरीलाई दिएको बयानमा रियाले सुशान्तलाई मानसिक समस्या रहेको र त्यसको उपचार भइरहेको भएता पनि केही सातादेखि औषधिउपचार छोडेको र डिप्रेसनका कारण आत्महत्या गरेको बताएकी थिइन्।
त्यस लगत्तै उनको चिकित्सकीय रिपोर्टहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको थियो भने उनको कोठामा भेटिएको डिप्रेसनविरूद्धको औषधिलाई समाचार च्यानलहरूले व्यापकरूपमा प्रसारण गरेका थिए।
हालै मुम्बईमा कार्यरत थेरापिस्ट सुसन वाकरले पत्रकार बर्खा दत्तलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सुशान्त आफ्ना बिरामी भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले सुशान्तलाई 'बाइपोलार डिसअर्डर र डिप्रेसन'को रोगी भएको बताएकी थिइन्।
यसले बिरामीको गोपनीयता भंग गरेको भन्दै प्रश्न उठायो भने जाँचमा राजपुतको मानसिक अवस्था पनि एउटा प्रमुख कारण हुनसक्ने देखाएको छ।